'Ilungelo lakho lokuFa kwi-COVID-19' kufuneka liqinisekiswe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » 'Ilungelo lakho lokuFa kwi-COVID-19' kufuneka liqinisekiswe
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
USenator wase-Australia uPauline Hanson
Akukho Vaccine iyimfuneko!
USenator wase-Australia uHanson uqhubeka esithi unyanisile naxa exelelwa ukuba izitofu esele zikhona zidlulisile izilingo eziyimfuneko kwaye zibeka umngcipheko ophantsi kakhulu kwezempilo xa kuthelekiswa nokusulelwa yile ntsholongwane.
Ukuchasana nokugonywa okungafunwayo nguSenator Pauline Hanson
USenator uPauline Hanson ubanga ukuba izitofu ze-COVID-19 azikavavanywa ngokufanelekileyo.
U-Pauline Hanson waziwa ngokuthetha impikiswano malunga nenkqubo yokugonywa. Ungumxhasi we-vax.
Izimvo zikaHanson zigxekwa ziingcali zezempilo kwaye zihlekisa nge-Intanethi.
Inkokheli yeqela lase-Australia elinephiko lasekunene le-One Nation, uSenator Pauline Hanson, uxele ukuba ishishini kunye norhulumente akufuneki "banyanzele okanye baxhaphaze" abantu ukuba bagonywe kwaye abantu kufuneka babe nenketho yokwala ugonyo lwe-COVID-19, nokuba bayasweleka ngenxa yentsholongwane.
Nguppears intshukumo enjaloziyaqhubeka e-UK nakwamanye amazwe.
“Nika abantu ithuba, babe nezitofu zokugonya… kwaye ukuba abantu, njengam, abangakhange babenalo iyeza lokugonya, ndiye ndifumane i-COVID-19 kwaye ndiyafa ngenxa yalo, lukhetho lwam olo,” utshilo uHanson.
Ibango lokuba izitofu ze-COVID-19 azikavavanywa ngokufanelekileyo, le ndlu yeeNgwevu yathi "'akazukuxhatshazwa okanye asongelwe ngokufumana isitofu."
UHanson uqhubeka esithi unyanisile naxa exelelwa ukuba izitofu esele zikhona zidlulisile izilingo eziyimfuneko kwaye zibeka umngcipheko ophantsi kakhulu kwezempilo xa kuthelekiswa nokusulelwa yile ntsholongwane.
UHanson waziwa ngokwenza iingxelo eziphikisanayo ngokubhekisele kwinkqubo eqhubekayo yokugonya. Kwinyanga ephelileyo, abavelisi kumdlalo werediyo odumileyo waseSydney bakhethe 'ukukhupha' amanye amazwi akhe ngokuchasene nogonyo ngexesha lodliwanondlebe olwasasazwa ngolibaziseko lwemizuzwana engama-30.
Amagqabantshintshi kaHanson agxekwa ziingcali zezempilo kwaye ahlekiswa ngokubanzi kwi-Intanethi nabagqabazi besithi ngokusasaza imiyalezo yokuchasana nogonyo uHanson ubeka ubomi babanye emngciphekweni. "Isidenge esiyingozi," omnye umntu wabhala kwi-Intanethi.
Ugonyo luya kunyanzeliswa kubo bonke abasebenzi abakhulileyo abasebenza e-Australia ukusukela nge-17 kaSeptemba. Inkulumbuso uScott Morrison uxele namhlanje ukuba urhulumente welizwe akanazicwangciso zesigunyaziso esibanzi sokugonya.
"Siyazi ukuba kukho inkuthazo eyakhiweyo kwisitofu sokugonya," utshilo u-PM. Kunqabile ukuba uyifumane [intsholongwane], akunakufane kwenzeke ukuba ugule kakhulu kwaye ungoyiki umhlobo wakho. ”
Ukuza kuthi ga ngoku, i-22.5% yabantu base-Australia abaneminyaka engaphezulu kwe-16 bagonywe ngokupheleleyo kwaye i-44.2% ifumene idosi enye yokugonya, ngokukaRhulumente.
Oktobha 21, 2021 kwi-01: 32
umfanekiso weskrini شات بغداديات umfanekiso weskrini للجوال شات عراقي شات العراق شات صوتي
UWilliam R MacPheat uthi:
Agasti 10, 2021 kwi-18: 49
Amayeza okugonya awakhange avavanywe ngokupheleleyo! Zilingo, ukusetyenziswa okungxamisekileyo kuphela. Akukho ngqwalaselo inikiweyo kwamanye amanyathelo okhuselo aneziphumo ebezingalindelekanga, okanye iivithamin D3. Akukho namnye onokuthi ngokusesikweni ukuba iziphumo zokugonya azimbi kangako njengeziphumo zentsholongwane. Ngapha koko kukho oogqirha abathi bayakholelwa ukuba ezi zitofu ziya kubulala abantu abaninzi kunentsholongwane. Asinalo ulwazi lwexesha elide kwizitofu zokugonya. Ulahlekisa abantu kweli bali.